Shikhar Post » रवि लामिछानेलाई लागेको आरोपबारे अमेरिकाबाट प्रेम बाँनिया यस्तो भन्छन्
काठमाडौं, ७ असार । केही दिनयता रबि लामिछानेबारे विभिन्न टिका-टिप्पणी भइरहेका छन् । उनलाई विभिन्न आरोप लागेका छन् । एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमबाट जनताको मन जित्न सफल भएका लामिछानेलाई अमेरिकी नागरिक देखि थुप्रै आरोप लागेका छन् ।
यतिसम्मकी रबिलाई जेल हाल्नेसम्मका टिप्पणी आइरहेका छन् । यसैविच उनका साथी तथा पत्रकार प्रेम बाँनियाले अमेरिकाबाट रबिमाथि लागिरहेको आरोपको कडारुपमा खण्डन गरेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले रबिबारे लागेको आरोपको कडा खण्डन गरेका हुन् । देशको प्रगति देख्न नचाहने तत्वका कारण रबिलाई यस्तो आरोप लागिरहेको बाँनियाले लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘आज रबि जीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् तिनकै कारणा मजस्ता धेरैलाइ देश छोड्न बाध्य बनायो ।’
उनी अझै अगाडी लेख्छन्, ‘ति तत्वहरुले अझ के-के समाप्त पार्ने हुन् भनी साध्य छैन्, यस्तै प्रवृतिका पात्रहरुका कारण आज मेरो देशको हालत खराब छ !’
बाँनियाले आफ्नो फेसबुकमा रबिबारे यस्तो लेखेका छन्ः
एउटा उल्कापात ! एउटा बज्र !! वा एउटा सकारात्मक बिध्वंश !! रबि लामिछानेलाई देशप्रवृति, पत्रकारिताप्रवृति र जीवनका धेरै अनुभव, लडाईंजुधाई र सत्यहरु सुम्पिएर र यताका केही ग्रहण गरेर केही समयको लागि विदेसिएको पात्र हूँ म । आज रबिजी त्यही स्टुडियोबाट बोलिरहेका छन् जसका लागि एकएक इटा संकलन गरेर, जग हालेर र त्यसलाई जीवन्त बनाएर हिंडेको हूँ म । आज रबिजी माथि आक्रमण गरिरहेका यिनै पिप्साहरुले हिजो मजस्ता धेरै-धेरैलाई देश छोड्न बाध्य पारेका छन्, कति-कतिको के-के समाप्त पारेका छन् भनीसाध्य छैन ।
यस्तै प्रवृतिका पात्रहरुका कारण आज मेरो देशको हालत खराब छ ! यो एक प्रकारको ओपनसेक्रेट हो । उनीहरु भनिरहेका छन्- रबिले वर्कपरमिट लिएन, यसो गर्यो त्यसो गर्यो, जेल हाल्नुपर्छ’ आदि । तर, बिचराहरुलाई के थाहा रबिजीले अमेरिकाको नागरिकता वा पासपोर्ट नै अमेरिकी सरकारलाई बुझाएको कति भयो ? अनि त यति ढिलो आएर (पत्रकारहरु) ‘डेट एक्सपाएर्ड न्यूज’को खेती गरिरहेका छन् ! आज प्रशारण हुने ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम हेर्न नभुल्नु होला र थाहा पाउनुहोला कि यो देशमा दुईचार दाना कुहिएका आलुहरुले सिंगै बोरालाई कसरी दुर्गन्धित बनाइरहेका छन् ?
हरपल कुरा भइरहन्छ र भनिरहेको छु रबिजी, कुनै पनि समय, जीवनको कुनै पनि मूल्य चुकाएर देशको लागि परिवर्तनका जबर्जस्त अगुल्टाहरु भएर अघि बढ्नैपर्छ र हमेशा म तयार छु अब त हामी झन् तयार भएका छौं विश्वभरीबाट !
फोटोः पत्रकार बाँनियाको फेसबुकबाट